Fertilizer | SHWE THIT OO
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင် (N) ……….. 21% ဖော့စ်စဖိတ် (P2O5) …………. 21% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O)……………… 21% Microelements Mg, Fe, Mn,
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် အသီး၊ အပွင့် အထူးအားဆေး ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၄၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုင်ထရိုဂျင်(N) ………….. 0% ဖော့စ်စဖိတ် (P2O5) …………. 40% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O)……………… 40% Microelements Mg,
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုက်ထရိုဂျင်(N)…………..14% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O5)……………..7% ပိုတက်ဆီယမ်(K2O)……………40% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S ပန်းများပွင့်၍ အပွင့်ညီညာခြင်း၊
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုက်ထရိုဂျင်(N)………….10% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O5)……………..52% ပိုတက်ဆီယမ်(K2O)…………… 20% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S ပက်ဖျန်းပြီးသည်နှင့်
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၂၀-၅၀)ဂရမ် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှု နိုက်ထရိုဂျင်(N) ……….. 38% ဖော့စ်စဖိတ်(P2O5) ………. 5% ပိုတက်ဆီယမ် (K2O) ………. 5% Microelements Mg, Fe, Mn, Zn,